Ikhaya > Imikhiqizo > Shaking Incubator
(Yonke imikhiqizo engu-24 ye-Shaking Incubator)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Shaking Incubator ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Shaking Incubator. Nikeza ikhwalithi ephezulu Shaking Incubator ngentengo ephansi eshibhile.
I-Model No.: BS-1E
Tag: Incubator yokudonsa kwezokwelapha , Incubator ye-Shaking Hospital , Shaking Incubator
Igama lomkhiqizo: Ukufakwa kwe-Shaking Incubator Into: BS-1E Imininingwane: Isibonelo BS-1E Amandla 140L Ibanga lokushisa 5-50 ℃ Ukushisa kokushisa ± 1 ℃ Amandla we-compressor 130W Amandla okushisa 200W Shake speed Qala- 280r / iminithi Imodi...
I-Model No.: BS--2F
Igama lomkhiqizo: Ukufakwa kwe-Shaking Incubator Into: BS - 2F Imininingwane: Isibonelo BS- 2F Amandla 280L Ibanga lokushisa 5-50 ℃ Ukuchaneka kokushisa ± 1 ℃ Amandla we-Compressor 242W Amandla okushisa < / p> 300W Shake speed Qala- 280r / min Imodi...
Tag: Shake Incubator , I-Biobase Laborator Shaker Shake Incubator , Ukubamba Intubator Intengo
Tag: I-Incubator Yelebhu , Iseluleko se-Laborator Incubator , Isici Sokushisa Incubator
Tag: I-Anaerobic Incubator , I-Anaerobic Incubator Incubator Intengo , Ithuluzi Lokufaka Incubator
Shaking Incubator ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Shaking Incubator eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Shaking Incubator ngokuqondile kusuka ku-Shaking Incubator abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.